Wararka Maanta: Jimco, Sept 28, 2012-Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo sheegay in Wadooyinka Muqdisho Qaar ka mid ah ay yaallaan Isbaarooyin lacago lagu Qaado
Duqa Muqdisho ayaa hadalkan sheegay kaddib socod uu ku maray degmooyin ka tirsan Muqdisho, wuxuuna xusay in loo baahan yahay in kuwa isbaarooyinka ay u yaallaan goobahaas la qabto, si dadka looga badbaadiyo.
"Ciidamada dowladda waxaan ugu baaqayaa inay wax ka qabtaan isbaarooyinka ay dhiganayaan kuwa ku labisan dharka ciidamada," ayuu Tarsan wariyeyaasha ugu sheegay xerada Maslax ee duleedka Muqdisho, halkaasoo uu socod ku tagay.
Hadalka guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa wuxuu imaanayaa xilli saakay uu mid ka mid ah askarta dowaldda oo ay isbaaro u taallo xaafadda nasteexo ee degmada Wadajir uu dilay qof rayid ah oo la socday gaari rakaab.
Dilka qofkan rayidka ah ayaa imaanaya kaddib markii askari ka tirsan ciidamadii ku sugnaa isbaaradaas uu rasaas ku furay gaari rakaab siday kaddib markii ay wadaha gaariga iyo askarigu ku murmeen lacago gaadiidka laga qaado.
Waddooyinka waaweyn ee Muqdisho ayaa waxaa lagu arkaa ciidammo xiran dharka milateriga oo gaadiidka dadweynaha lacago ka qaadaya, iyadoo isbaarooyinka ay soo xoogeysteen markii lasoo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Ma ahan markii ugu horreysay oo mas'uul ka tirsan dowladda Soomaaliya uu ka digo isbaarooyin la dhigto waddooyinka Muqdisho, kuwaasoo ay inta badan ka cowdaan wadayaasha gaadiidka iyo dadka rakaabka ah ee gaadiidka la socda.